Automobile International of Paris မှာပြသနေပြီဖြစ်တဲ့ Lamborghini Terzo Millennio! – AutoMyanmar
Automobile International of Paris မှာပြသနေပြီဖြစ်တဲ့ Lamborghini Terzo Millennio!
Lamborghini ဟာအနာဂတ်လျှပ်စစ်ပြိုင်ကား ဒီဇိုင်းတွေပါဝင်တဲ့ Terzo Millennio ကိုတော့ ၃၃ ကြိမ်မြှောက်ကျင်းပတဲ့ International Automobile Show မှာပြသနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ International Automobile ကိုတော့ Paris မြို့မှာ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်နေ့ကနေ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။ ကျင်းပမယ့် ၅ ရက်တာကာလအတွင်းမှာ Terzo Millennio ဟာတော့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Terzo Millennio ဟာတော့လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလက USA မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ကားတစ်စီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Lamborghini Centro Stile နဲ့အနည်းငယ်ဆင်နေပြီး အနာဂတ်ဒီဇိုင်း၊ နည်းပညာတွေ ပါဝင်တဲ့ကားတစ်စီးပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း၊ ဒီဇိုင်းပိုင်းတွေကောင်မွန်နေရုံသာမက လျှပ်စစ်ပြိုင်ကားအနေနဲ့ပါရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တာကြောင့် အနာဂတ်မှာ ပြိုင်ကားကြိုက်နှစ်သက်တွေရဲ့အသည်းတစ်ခြမ်းဖြစ်လာမှာတော့အသေအချာပါပဲ။
Lamborghini ဟာ အနာဂတ်ပြိုင်ကားတွေအတွက် Energy storage systems, innovative materials, propulsion system, visionary design နဲ့ emotion အစရှိတဲ့ dimension ၅ မျိုးကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အစီအစဉ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Energy storage System နဲ့ innovative materials ကိုတော့ နိုဝင်ဘာလကမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Terzo Millennio မှာ MIT (Massachusetts Institute of Technology) နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ကျန်ရှိနေတဲ့ dimension ၅ ခု အတွက်ရောဘယ်လိုတွေပြသအကောင်ထည်ဖော်သွားမလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
Automobile International of Paris မှာရှိနေတဲ့ Lamborghini Terzo Millennio ပုံရိပ်တွေကတော့ ??
Lamborghini, Motor Show and Event, New Technology